Estonia iyo Georgia waxay la wadaagaan khibradooda ku-meel-gaarka ah maamul-wanaagga Caribbean-ka
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Kulamada (MICE) » Estonia iyo Georgia waxay la wadaagaan khibradooda ku-meel-gaarka ah maamul-wanaagga Caribbean-ka
Hindisuhu wuxuu abuuri doonaa dawlado Kariibiyaan ah oo aan toos ahayn oo udub dhexaad u ah muwaadiniinta wuxuuna wax ka bedeli doonaa qaybta dadweynaha ee gobolka.
Marka ay timaaddo aragtida Kariibiyaanka ee dawladda qarniga 21aad, Estonia waa tusaale aad u wanaagsan oo ah suurtogalnimada isbeddelka dawladaha iyo waddamada. Iyada oo ay ku nool yihiin 1.3 milyan, Estonia waxay ka mid tahay hoggaamiyeyaasha ugu sarreeya adduunka ee horumarinta e-dawladnimada iyada oo 99% adeegyadeeda dadweynaha laga heli karo onlayn 24/7.
Waddan xubin ka ah Midowga Yurub, 1997 Estonia waxay bilowday safarkeeda dhismaha iyo horumarinta bulsho dhijitaal ah oo furan iyada oo loo marayo isticmaalka waxtarka leh ee macluumaadka iyo tiknoolajiyada isgaarsiinta (ICT). Waxaa lagu sii shiday rabitaan siyaasadeed si loo wanaajiyo tartanka dawladda, kor loogu qaado wanaagga dadkeeda, iyo in la dhiso hab-deegaan dijital ah oo hufan, ammaan ah, la heli karo oo daah-furan, Estonia hadda waxay noqotay mid ka mid ah dalalka ugu fiilsan iyo tignoolajiyada horumarsan ee aduunka.
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee nidaamka elektaroonigga ah ee dalka, waa bixinta kaararka aqoonsiga ee muwaadiniinta taasoo u oggolaanaysa inay si dijital ah u helaan dhammaan adeegyada Estonia ee Estonia, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, e-canshuurta, diiwaangelinta ganacsiga, e -dugsi, warqad dhakhtar, elektaroonig degenaansho, bangiga elektarooniga ah iyo caafimaadka elektaroonigga ah. Ballaarinta adeegyada elektaroonigga ah waxay keeneen waqti kaydin iyo hufnaan qiimo leh.
Dood-cilmiyeed saddex maalmood soconaysa, oo loogu talagalay in loogu diyaariyo xirfadlayaasha dawladda shaqada la qabanayo si loo dhiso dawladihii qarniga 21-aad, ayaa socon doona Shir-madaxeedka 17-ka ilaa 19-ka Janaayo. Wax-soo-saarka muhiimka ah ee dood-cilmiyeedka ayaa noqon doona diyaarinta qaab-dhismeed lagu dardargelinayo bixinta adeegyada dawladda ee elektrooniga ah, isbeddelka dawladaha Kariibiyaanka iyo horumarinta tartanka gobolka.
Qaar ka mid ah madaxda dowladda ayaa aqbalay casuumaada shirka. Wasiirada ICT iyo Maamulka Dadweynaha oo ay weheliyaan xoghayayaashooda joogtada ah iyo farsamoyaqaannada; Hawl-wadeennada Shabakadda ICT iyo Nidaamiyeyaasha; Hay’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya horumarinta iyo ganacsatada ayaa ka qeyb galaya dood cilmiyeedka.
Antigua Antigua and Barbuda Caribbean Estonia Dowladda caddaalad
Joojinta: Dibadbaxyada ballaaran ayaa curyaaminaya nidaamka gaadiidka ee caasimadda Giriigga
Jasiiradda Caribbean-ka ah ee gaarka loo leeyahay waxay rajeyneysaa inay noqoto halka loo yaqaan 'Royal honeymoon'
Goorma ayaad u baahan tahay Qareen Dastuuri ah?